माधवकुमार र नारायणकाजीको लहैलहैमा प्रचण्डले राजनीति सिध्याए : दुर्गा प्रसाईं माधवकुमार र नारायणकाजीको लहैलहैमा प्रचण्डले राजनीति सिध्याए : दुर्गा प्रसाईं Canada Nepal
काठमाडौं । स्थिरताका लागि जनमत पाए पनि नेताहरुको खिचातानीले मुलुक अस्थिरतामा धकेलिएको छ । अस्थिर राजनीति निम्तिनुमा नेताहरु एकअर्कामाथि दोषारोपण गरिरहेका छन् । तर, उनै नेताहरुको नाडी छामेका एक चर्चित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं मुलुकका लागि अहिले केपी शर्मा ओलीको विकल्प सोच्न नहुने बताउँछन् ।
स्पष्ट वक्ताको परिचय बनाएका झापाको बिर्तामोडस्थित बिएण्डसी अस्पतालका सञ्चालक प्रसाईं मुलुकको राजनीतिको एक साक्षी हुन् । बेमेल राजनीतिलाई सहमतिमा पु¥याउन भूमिका निर्वाह गरेका उनै प्रसाईं अहिले सुझाव मात्रै दिन्छन्, राजनीतिज्ञलाई । आफैं सक्रिय भएर नेकपाको एकता अर्थात केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच मिलाप गराउन खोज्दा उल्टै गम्भीर आरोप लागेपछि अहिले सुझाव मात्रै दिने गरेको प्रसाई बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प सोच्न नहुने बताएका उनले प्रचण्डको राजनीति सिध्याउन माधवकुमार नेपाल र नारायाणकाजी श्रेष्ठको भूमिका देखिन थालेको जानकारी दिए । खारिएका राजनीतिज्ञको रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिनेका व्यवसायी प्रसाईंले प्रचण्ड स्वयं खराब नरहेको पनि बताउँछन् । तर, माधवकुमार र नारायणकाजीको कुरा सुनेर अघि बढ्दा प्रचण्डले आफ्नो राजनीति सिध्याउन थालेको प्रसाईंको बुझाइ छ । व्यवसायी प्रसाईंका लागि बालुवाटार र खुमलटारको ढोका सधैँ खुला छ ।
उनै प्रसाईंसँग प्रधानमन्त्री ओलीले १५ वर्ष एमालेको महासचिव हुँदा माधवकुमारले आफूलाई अगाडि बढ्न नदिएको गुनासो गरेका छन् । प्रसाईं ओलीलाई हजुरबुबाले सम्बोधन गर्छन् । माधवकुमारले १५ वर्षसम्म आफूलाई अगाडि बढ्न नदिएको हजुरबुवा ओलीले आफूसँग गरेको गुनासो क्यानडानेपाललाई सुनाउँदै प्रसाईंले भने, ‘मलाई हजुर बुबाले भन्नुहुन्थ्यो, ‘नाती, माधवकुमार नेपालले हिजो १५ वर्ष महासचिव हुँदाखेरी मलाई कुनै पनि सभामा, कुनै पनि आमसभामा, कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भएर जान नदिएको, मलाई पिना पेलेजसरी राखिएको थियो ।’
माधवकुमारले पार्टी चलाउन सक्नेमा ओलीमाथि शंका थियो । यही शंकाले पार्टीको नेतृत्व ओलीले माधवकुमारलाई भन्दा प्रचण्ड बुझाउन चाहन्थे । ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रसाईं भन्छन्, ‘माधवकुमार नेपाललाई पार्टी बुझाउनुभन्दा भोलि गएर दाहाल (प्रचण्ड)लाई बुझाउँछु भनेर पो मैले पार्टी एकीकरण गरेको त, प्रचण्डलाई ल्याएको हो ।’
२०७५ जेठ ३ गते एकता भएको एमाले र माओवादी केन्द्र पुनः अहिले पूर्ववत् अवस्थामै छन्, अर्थात एमाले र माओवादी केन्द्रकै रुपमा सक्रिय छन् । तर, प्रचण्डलाई साथ दिएका धेरै शीर्षनेताहरु माओवादी केन्द्र छाडेर ओलीलाई साथ दिन एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । जनयुद्धमा साथ दिएका कमाण्डरहरु अहिले प्रचण्डलाई छाडेर ओलीलाई साथ दिनुमा नारायणकाजी श्रेष्ठको व्यवहारलाई लिन्छन्, व्यवसायी प्रसाईं ।
जनयुद्धमा नहोमिएका नारायणकाजीको जब माओवादीमा प्रवेश भयो, तब प्रचण्डको राजनीति ओरालो लागेको प्रसाईंको टिप्पणी छ । श्रेष्ठको प्रवेशपछि माओवादीबाट जनयुद्धमा होमिएका नेताहरु बाहिरिन थालेका उनको भनाइ छ । आफ्नै राजनीति गुरु मोहन वैद्य किरणदेखि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, डा. बाबुराम भट्टराई हुँदै अहिले आएर रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साहले प्रचण्डको साथ छोडेका छन् । यसरी आफ्नै राजनीति गुरु र सहयात्री नेताहरुले प्रचण्डलाई छाड्नुमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र माधवकुमार नेपालको विश्वास गर्दाको परिणामको रुपमा व्यवसायी प्रसाईं लिन्छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग नजिक र प्रचण्डसँग टाढा नरहेको बताएका उनले भने, ‘म प्रचण्डसँग टाढा छैन, केपी ओलीसँग पनि नजिक छैन । दुईजनासँग ब्यालेन्समा छु ।’ दुवैजनासँग सम्बन्ध राम्रो रहेको बताउने व्यवसायी प्रसाईको प्रचण्डसँग भने चित्त दुखाइ छ । चित्त दुखाइको कारण अस्थिर राजनीतिको घेराबन्दीमा प्रचण्ड बसिरहनु रहेको उनले बताए ।
‘प्रचण्डज्यूसँग एउटै कुरामा मलाई चित्त नबुझेको, तपाईं यो घेराबन्दीबाट बाहिर निस्किनुस्, कम्युनिष्ट पार्टी एक गरौँ भन्ने म । तर, प्रचण्डले यस विपरित गर्दै हिँड्नु भएको छ ।’
माधवकुमार र नारायणकाजीको लहैलहैमा लागेर पार्टी सिध्याउने बाटोमा बालहठसहित प्रचण्ड अघि बढेको प्रसाईंको बुझाइ छ । नारायणकाजीसँग आफ्नो व्यक्तिगत दुश्मनी नरहेको बताएका व्यवसायी प्रसाईं भन्छन्, ‘उहाँसँग मेरो व्यक्तिगत दुश्मनी पनि हैन, मलाई उहाँको राजनीतिक चरित्र, उहाँको राजनीतिप्रति मलाई विश्वास नभएर हो । उहाँ (नारायणकाजी) माओवादीमा आइसकेपछि जनयुद्ध लडेका मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, टोपबहादुर रायमाझी, रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, प्रभु साहलगायतका नेताहरु कहाँ पुगे ? उहाँ (नारायणकाजी)कै कारण हो । पार्टी सिध्याइदिनु भयो ।’
अब पनि नारायणकाजीलाई राजनीति गुरु थापेर अघि बढेमा प्रचण्डको राजनीति सकिने व्यवसायी प्रसाईंको अड्कल छ । ‘अझै प्रचण्डले उहाँ नारायणकाजीलाई गुरु थापेर हिँड्नु भयो भने नि, प्रचण्डको एक दिन, यस्तो नराम्रो अन्त्य हुन्छ, उहाँले बुझ्दा हुन्छ । मैले बोलेको कुरा, उहाँले लेखेर राख्दा हुन्छ, भित्रि डायरीमा । सत्य कुरा भन्दैछु।’
आफ्नै मागअनुसार पुनर्स्थापित भएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक नै प्रचण्डहरुले बहिस्कार गरेको हिँड्नु अनुचित रहेको बताएका उनले अब कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहमत भएर प्रचण्डले जनमतको अपमान गरेको ठहर्ने बताए । ‘संसद किन बहिस्कार गरेर हिँडेको ? संसद चलाउनु पर्दैन । यदी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने किन कांग्रेसको टिकट नलिने, हामी सिधै कांग्रेसलाई भोट हालेको भए हुन्थ्यो त, कांग्रेसलाई नै गुरु मान्ने हो भने । कम्युनिष्ट हुँ भन्ने, अनि केपी ओलीसँग रिस उठ्यो भनेर कांग्रेसको सरकार बनाउन साथ दिएर हिँडेपछि अर्काेपल्ट प्रचण्डज्यू भोट माग्न जाँदा के भन्छन् जनताले ?’
प्रचण्डलाई अरुको पार्टी पाउँ भनेर निवेदन हाल्नसमेत पु¥याएको टिप्पणी गरेका उनले भने, ‘कस्ताखालका छन् प्रचण्डलाई सल्लाह दिने, कस्ताखालका वकिल हुन् सल्लाह दिने, मैले भनिरहेको छु त, प्रचण्डको माया छ । प्रचण्ड राम्रो मान्छे हो । तर, बिगारे ।’
साविक नेकपा खारेज गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने सर्वाेच्च अदालतको गत फागुन २३ गतेको फैसला पुनरावलोकनका लागि प्रचण्डले निवेदन दिएका थिए । तर, सर्वाेच्च अदालतले पुनरावलोकन हुन नसक्ने आदेश दिएको थियो ।
कम्युनिष्ट एकता गराउन आफ्नै पहलमा ओली र प्रचण्डलाई ६ बुँदे सहमति गराएको जानकारी दिएका प्रसाईंले भने, ‘मेरै पहलमा ६ बुँदे सहमति भएर अघि बढेको, तर बीचमै बिगारे । मेरै मोबाइलबाट राति ९ बजे कुरा गरेको प्रचण्डज्यूसँग । भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच भेट भएको ।’
ओली र प्रचण्डबीच फाटो ल्याउन सक्रिय समूहले आफूविरुद्ध पनि आरोप लगाएको प्रसाईंको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘ओली र प्रचण्डबीच एकता गराउन पहल गरेपछि मलाई आरोप लगाए । दुर्गा प्रसाईंले अब प्रचण्डलाई सक्न आँट्यो भनेर आरोप लगाए । प्रचण्डसँग टाढा बनाउने काम गरे । मलाई पनि प्रचण्डलाई सक्नु पनि थिएन, लिनु पनि थिएन, दिनु पनि थिएन । मैले पनि नमस्ते भनेर प्रचण्डलाई छोडिदिएँ ।
मलाई सम्बन्धन नदिए पनि हुन्छ
प्रसाईं सञ्चालक रहेको झापास्थित बिएण्डसी अस्पतालको सम्बन्धनको विषयले बेला बेला राजनीति मात्रै होइन स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि तरंग ल्याउने गरेको छ । प्रसाईंको बिएण्डसीसहितका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने भनेर जब जब डा. गोविन्द केसी अनशसनमा बस्छन्, त्यसबेला यसले चर्चा पाउने गरेको छ । बिएण्डसीलाई सम्बन्ध दिलाउन दुर्गा प्रसाईंले ओलीलाई समर्थन गरेको आरोप छ । तर, यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्छन्, प्रसाईं ।
उनले आफ्नो अस्पताललाई सम्बन्धन नदिए पनि कुनै फरक नपर्ने बताउँछन् । बिएण्डसी गुणस्तरीय सेवा दिन सफल भएकाले जनताले विश्वास गरेकाले सरकारले सम्बन्धन नदिए पनि आफ्नो अस्पताल चलिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘सम्बन्धन लिनलाई म लागेको होइन । अहिले पनि म सम्बन्धन लिन लागेको छैन । मलाई सम्बन्धन नदिँदा पनि हुन्छ, मलाई केही फरक पर्दैन । मेरो हस्पिटल राम्रो चलेको छ । नेपालमा मेरो जत्तिको हस्पिटल कसैको छैन, म दावा गर्छु । त्यसमा पनि दक्षिण पूर्वी एसियाकै नमुना क्यान्सर हस्पिटल ल्याएको छु ।’
चैत्र २९, २०७७ आइतवार १९:४९:०१ बजे : प्रकाशित